दूतावासले धान्नै सक्दैन ! श्रमिकको गुनासो कसले सुनिदिने ?
कास्कीमा जेठ ७ गतेसम्म निषेधाज्ञा
ई-सेवासँगको सहकार्यमा रिचार्जर ल्यायाे ९९९ मा अक्सिमिटर, कोभिडका सामान निशुल्क डेलिभरी
काेराेना महामारीबीच रातो मच्छिन्द्रनाथको रथारोहण सम्पन्न (तस्बिरहरू)
खल्ती वालेटबाट शुल्क तिरेर सलमानकाे फिल्म 'राधे' हेर्न सकिने
बलिउडमा लिंगभेद हुने गरेको अभिनेत्री दियाको दाबी
इटहरी उपमहानगरले सुरु गर्‍याे ५० बेडको सुविधासम्पन आइसोलेसन
जनताको आशीर्वादले फेरि मुख्यमन्त्री भएँ, गण्डकीलाई उदाहरणीय प्रदेश बनाउँछु : गुरुङ
सगरमाथाको सफल आरोहण गरेर बहराइनका राजकुमारकाे टाे‍ली काठमाडौंमा
पूर्वराजा शाह अस्पतालबाट डिस्चार्ज
खनाल–नेपाल समूहले कर्णाली प्रदेश कमिटीलाई दियो पूर्णता (सूचीसहित)
ब्लग दूतावासले धान्नै सक्दैन ! श्रमिकको गुनासो कसले सुनिदिने ? सुरेश भट्ट आश्रिन
बाह्रखरी - बुधबार, असार ३१, २०७७
एकाबिहानै फोन आयो — सर, हामी ३७ र अर्को १८ जना दूतावास घेर्न जाँदैछौ । अति भो !
मैले तत्काल भने — भाइ, हामी जहाँ छौँ सोही देशको नियम कानुन पालना गर्नुपर्छ । गलत कदम उठाउने दुस्साहस नगरौँ ।
— त्यसो भए के गर्ने त ? हामी घर नजाने ? दूतावासले हाम्रो कुरै सुन्दैन । तपाईँ आउनुस् हामीलाई सहयोग गरिदिनुस् । दूतावासका कर्मचारीलाई हाम्रो कुरा सुन्न भन्दिनुस् ।
फोन राखेर समय हेरेको विहान ७ बजेको रहेछ । केही समय घोत्लिएपछि सोचेँ, — म बबुरोको कुरा पो कस्ले सुन्ला र ! पुनः सोचे म गइन भने ती भाइहरूले मप्रति गरेको विश्वास गुम्नेछ । उनीहरूको आग्रहलाई लत्याउनु एकजना आप्रवासी श्रमिकले अर्को श्रमिकको हितमा असहयोग गर्नु हो । जानुपर्छ । म जान्छु । निर्णय गरेँ ।
डेराबाट निक्लिनुअघि नित्यकर्म गरेर बाहिर निस्किएँ । चर्को घामको रापले सडकमा एउटा भँगेरो जीवनमरणको दोसाँधमा छट्पटाई रहेको देखेँ । अफसोस ! नजिक पुगेर हेर्दा उसले प्राण त्यागिसकेको थियो ।
जीवन बचाउन संघर्ष गर्दागर्दै भँगेराको प्राण ग्एको देख्दा मन नरमाइलो भयो । थप जिम्मेवारी महसुस भयो । दूतावास जाने ती श्रमिक दाजुभाइहरूलाई सहयोग गर्न अलमल आलटाल नगरी ट्याक्सी समातेर दूतावास अबुहमरतर्फ लागेँ । ट्याक्सी हुइँकियो ।
बाटोमा जाँदाजाँदै तिलु शर्मा पौडेल, थम गिरी, आत्रेय दाई, गोपाल न्यौपाने (प्रदेशी) र सन्तोष पौडेललाई सम्झिएँ । सहयोग मागेँ, आफू दूतावास जाँदै गरेको जानाकारी दिए ।
ट्याक्सी दूतावास छेवैमा रोकियो । बिल देखाउँदै हिन्दी भाषामा भन्यो — भाइ २६ रियाल । आज मलाई पैसासँग सरोकार थिएन । यस कोभिड–१९ को प्रतिकूल अवस्थामा सहयोग गर्ने, हाम्रा नेपाली श्रमिकहरुको दुःख पीडामा मलम बन्ने तीव्र इच्छामात्र थियो । यसअघि पनि म आबद्ध संगठन (विवेकशील नेपाली दल) ले दोहा कतारमा पीडितका आवाज लिएर दूतावास नधाएको भने होइन । श्रमिकका लागि परामर्श सेवा, सहायता वितरण र कोरोनाबाट बच्न चेतनामूलक कार्यक्रम गर्दैआएको थियो ।
ट्याक्सीबाट ओर्लिएर दूतावासको ढोकामा चारैतिर नजर डुलाएँ । दूतावासको ढोकामा पुगेका श्रमिकहरू गर्मीबाट बच्न कुनै बुट्यानको छहारीमा टाउको लुकाउँदै गरेको देखिन्थ्यो ।
मैले गर्नसक्ने केही थिएन । सक्ने भनेको ती श्रमिकको पीडा महसुस गर्ने र आवाज बनिदिनेमात्र न हो । बिहान फोन गर्ने व्यक्तिलाई खोजेँ । कतै देखिन । फोन गरेँ — भाई म दूतावासको गेटअगाडि छु । बिहान ९ बजेको अरबको घामको तापक्रम ४०–४५ डिग्री हुँदो हो । बिहान फोन गर्ने भाइ आइपुगे ।
नजिकबाट — सुरेश दाइ हो ? सोधे । हो — मैले भने । भाइले सबैलाई म भएतिर आउन आह्वान र संकेत गरे । उनीको ३०–३५ जनाको समूह घर जान पाउने आशा बोकेर आउँदै थिए । सबैका अनुहार हँसिला भए पनि मनमा दुःखपीडा भरी गुम्सिएका । उनीहरुमा अब दूतावासले आवाज सुन्छ र घरजान पाइन्छ भन्ने आशा पलाएजस्तो लाग्थ्यो ।
दूतावासमा पुगिसकेका ३०–३५ जना श्रमिक दाजुभाइले पीडाको बेलिविस्तार लगाए — हामी ४ — ५ महिनादेखि बेतलबी बसेका छौँ । एक जनाले भने — मलाई पेटको क्यान्सर छ । तैपनि घर जान पाइन । दूतावासले अनेक प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र आउनू भन्छ । अर्कोले फोटो देखाउँदै बोले — सानी छोरी अहिले बिरामी छिन् अस्पतालमा । सर, दुःखमा म परिवारको साथमा नभए पैसाले के गर्नू ! घर जाने व्यवस्था मिलाई दिनूपर्‍यो ।
मोबाइल बज्यो — सुरेश सर, म कुमार मैनाली । मेरो गाउँले भाइको मलेशियामा मृत्यु भएछ । घरमा रूवाबासी छ । के गर्ने होला ? मृतकको दाइ यहाँ कतारमा छ । सकिन्छ भने सहयोगको अपेक्षा गरेको छु । हुन त तपाईँले गर्न सक्ने केही होइन र पनि दुतावाससम्म आवाज पु¥याउने काम गरिदिनु होला ।
दूतावासको ढोकामा एक कर्मचारीले (नाम खुलाउन चाहिन) जम्मा भएका श्रमिकहरूले घर जान पाऊँ भनी दिएको निवेदन एकएक गर्दै समात्दै थिए ।
दूतावासको गेटमा रहेका कर्मचारीसँग भित्र जान मैले अनुरोध गरेँ । पहिले सीधै अस्वीकार भयो । मुखमा लगाएको मास्क खोलेर आफ्नो पहिचान दिएपछि भने — समय भएको छैन । कस्लाई भेट्न जाने हो ? कसैलाई होइन बाहिर रहेका हाम्रा नेपाली श्रमिक दाजुभाइको आवाज लिएर जाने हो — मैले भने । पख्नुस् माथि खबर गर्छू — कर्मचारीले भने ।
भित्र जान पर्खिनु परेपछि त्यो समय पुनः साथीहरूको सहयोगमा लागेँ । समस्याअनुसार निवेदन लेखिदिने, दूतावासले माग गरेअनुसारको कागजपत्र पूरा भए नभएको हेर्ने र दुःखको पोको मेरा सामु बिसाउनेहरूका कुरा सुनिदिने गर्न थालेँ ।
जानुस् — खबर आयो । दूतावासभित्र विभिन्न समस्या लिएर समाधान खोज्न आउनेहरू निकै थिए । सरासर माथिको कोठा गएर कोरोना उद्धार कार्यमा संलग्न दूतावासका कर्मचारीसँग भेट गरेँ । भने — सर बाहिर हाम्रा दाजुभाइहरू आएका छन् । पीडाले आक्रान्त भएरै नाराबाजी गर्ने अवस्थासम्म पुगेका छन् । उनीहरूको थुप्रै समस्या र गुनासो छ दूतावासप्रति । सम्बोधन गर्नुहोला, पीडितका कुरा सुनिदिनु होला — अनुरोध गरेँ र बाहिर सुनेका पीडा सुनाएँ ।
दूतावासका एक जना कर्मचारीले आफ्नो भडास पोख्दै भने — कतिलाई सम्झाउने ? के भन्ने? सम्झाएर सम्झिने भए पो सम्झाउने । यतिका श्रमिकका समस्या छन् । कसरी पीडितलाई सान्त्वना दिने ? सम्झाउने तपाइँहरूको काम हो । बाहिर भएको भीडलाई शान्त बनाइदिनूस् — मैले पुनः अनुरोध गरेँ । कर्मचारीहरूको आक्रोश पनि नाजायजै त थिएन ।
चार लाख नेपाली भएको ठाऊँमा करीब ४० हजार नेपाली रोजगार गुमाएका, बिरामी भएका केहीको करार अवधि समाप्त भएका र केही गैरकानुनीरूपमा काम गरेर हिरासतमा भएका र बिरामीहरू तत्काल घर फर्किन चाहन्छन् ।
अहिलेसम्म दोहाबाट १३ वटा चार्टर प्लेनमा जम्मा २२ — २३ सय जना घर फर्किएका छन् । यो संख्याको आधारमा दोहा आउने प्लेन निकै कम हो । यहाँ सरकारको अकर्मण्यता र अक्षमताको दोष भने नेपाली दूतावासले सहेको छ । दूतावासले धान्नै नसक्ने अवस्थामा नेपालीहरू दैनिक दूतावास धाउने गर्छन् ।
एकजना कर्मचारी भन्छन् — नेपाल सरकारले दूतावाससँग समन्वय गरी घर जाने श्रमिकहरूको संख्याको आधारमा पर्याप्त उद्धार उडान पठाउने हो भने यताको समस्या सजिलै समाधान गर्न सकिन्छ ।
नियमित उडान कुरेर घरबिदामा जान बसेकाको संख्याको लेखाजोखा अब के गर्न पर्यो र ? मैले यहाँ मुख्य दोषी नेपाल सरकार देखेको छू ।
दूतावासबाट प्राप्त जानाकारीअनुसार मार्चसम्म रोजगारी नभएका र गुमाएका नेपालीहरूलाई लैजाने तयारी भएको थियो । तर एउटामात्र उडानले कतिलाई पठाउने ?
हिरासतमा रहेका नेपालीका बारे एकिन जानकरी प्राप्त नभएको दूतावासको भनाइ छ ।
यतिबेला प्रवासमा रहेका आफ्ना नागरिकको सुरक्षित जीवनका लागि सरकारले कर्तव्य निर्वाह गरेको देखिन्न । अन्य मुलुकले देशबाहिर फसेका नागरिकलाई कूटनीतिक नियोग परिचालन गरी पर्याप्त उद्धार उडानमार्फत स्वदेश फर्काइरहेका छन् । तर, नेपाल सरकारले विश्व स्वास्थ्य संगठनको निर्देशनको दुहाई दिँदै जो नागरिक जहाँ छन्, त्यहीँ सुरक्षित भई बस्नू भन्दै सूचना जारी गरी जिम्मेवारीबाट पन्छिएको छ । यसले गर्दा प्रवासी नेपालीहरूमा नैराश्य उत्पन्न भएको छ ।
हाल दोहा कतार
म विजयी मुद्रामा बाहिर निस्केँ । मन्त्रीले पीएलाई फाइल आफैँ तल ओर्लेर महानिर्देशकलाई बुझाउन भने । मसँगै गएँ । दीप्तजंग... सोमबार, वैशाख ६, २०७८
गरिबमारा नहोस् बन्देज !
आमाको माया र ममता अपार दिवस खनिया
निरंकुश ओलीतन्त्रबाट उन्मुक्ति
यसरी ढलेको थियो देउवा सरकार
नेपालमा निको भएका : ३१६४६३
जम्मा मृत्यु : ४२५२
कूल संक्रमित: ४२२३४९